China Wire harato fefy nohomboina fefy zaridaina fefy zaridaina mpanamboatra sy mpamatsy | Xinpan
Ny fefy 3D mesh dia manasongadina ireo tara-pahazavana miendrika "V", izay misy tariby mitsivalana manalalaka ny sakan'ny tontonana iray manontolo izay afaka manome tanjaka sy henjana. Amin'ny maha-karazana tariby tariby voaforona azy, ny tontolon'ny fefy tariby 3D dia vita amin'ny vy vy na tariby vy be indrindra, izay miondrika mankany amin'ny zoro "V" mety ary avy eo atsofoka ao anaty tontonana.
Ho an'ny endriny tsy manam-paharoa, fisehoana tsara tarehy sy haavon'ny fiarovana fiarovana, rafitra fiarovana fefy tariby fiarovana 3D dia mety amin'ny toerana onenana sy fialamboly. Ary mbola manolotra fanatsarana ny fahombiazana sy ny androm-piainana maharitra manohitra ny halatra sy ny fanimbana noho ny tariby mavesatra, ny rafitra nohamafisiny mafy, ny fanamafisana ny fanamafisana, ny fonosana vovoka tena maharitra sy miaro ny tontolo iainana.
Halavan'ny fefy (2m)
Halavan'ny fefy (2.5m)
Milanja kg / sombina
Diameter tariby mm
Milanja kg / set
Famaritana ny fefy Triangle Bend
Fanokafana ny harato Hatevin'ny tariby Ny sakany Haavo tontonana Isan'ny vala Karazana paositra
2.9m 630mm 2 Round Post48x1.5 / 2.0mm
60 × 1,5 / 2.0mm Square Post (SHS) 50X50x1.5 / 2.0mm
Fitsaboana ambonin'ny tany: mafana nandroboka nandrisika, nandrisika + vovoka mifono, nandrisika + PVC mifono
Loko: maitso RAL 6005, volondavenona RAL 7016, mainty RAL 9005, ny loko RAL rehetra dia azo namboarina.
Fanamarihana: ny fefy dia azo namboarina mifanaraka amin'ny takinao raha toa ka tsy afa-po aminao ny famaritana etsy ambony.
Tsy maintsy halevina amin'ny tany ny lahatsoratra, 0,5 m farafaharatsiny hatramin'ny 1.2 m ambony indrindra.
Takelaka maromaro azo apetraka eo an-tampon'ny tsirairay mba hahatratrarana haavo avo kokoa.
Ny elanelana misy eo amin'ny fononteny amin'ny poste dia mety 0,3 m.
Misy torolàlana fametrahana feno azo alaina amin'ny fangatahana.
Fonosana takelaka fefy 3D:
Ny takelaka fefy 3D fonosina amin'ny paleta hazo ary hosaronan'ny sarimihetsika plastika avy eo nofonosina mafy amin'ny kasety ho fiarovana ny fitahirizana sy ny fitaterana.
Fampiharana: amin'ny famoronana fefy manodidina ny ozinina, trano fanatobiana entana, tranom-panjakana sy fotodrafitrasa toa ny sekoly, kianja filalaovam-baolina ary kianja filalaovana, kianja filalaovana, ary tany tsy miankina.
Teo aloha: Tady fisolo hareza fisaka 15m isaky ny horonana 10 m isaky ny horonana
Manaraka: Fefy vonjimaika fefy fefy azo fefy fefy Canada fefy
Fefy zaridaina haingon-trano
Fefy an-jaridaina mifono tariby
Fefy Wire Mesh Garden
Pvc mifono Wire harato Garden Fefy
Fefy harato ho an'ny zaridaina
Fefy zaridaina harato
Fefy vonjimaika fanamboarana fefy azo entina ...